> Resource> Nyefee> otú nyefee faịlụ site PC ka Nexus 5
Nwere nsogbu na-ebufe faịlụ site na PC na-Nexus 5?
Nwetara m Nexus 5 ụnyaahụ. N'ihi ya, m depụtaghachiri m niile eserese na music si m SGS3 m PC site USB. Ugbu a Agbalịrị m nnọọ na-edegharị ndị faịlụ n'ime m ọhụrụ ekwentị site na eriri ma ọ dịghị laa. Ekwentị na egosi elu dị ka a mbanye n'okpuru kọmputa m. M nwere ike inwe n'ime ekwentị na pịa gburugburu. Ozugbo m na-amalite na-agbalị iṅomi n'elu faịlụ, ọ na-aga n'ihi na ma eleghị anya, 10-15 secs mgbe ahụ dị nnọọ ụlọ, na n'ezie gbachiri m nile faịlụ usoro na m PC ruo mgbe m ịkwụpụ eriri USB site na ekwentị. PC bụ Win7 64b. Ihe ọ bụla echiche?
O doro anya na ọ bụ a ọma na free ụzọ nyefee media faịlụ site na kọmputa gị amamiihe Google Nexus 5 site na eriri USB. Otú ọ dị, mgbe ụfọdụ, ihe na-adịghị aga were were. Dị ka onye ọrụ n'elu, ị nwere ike ghara ikwe ka kọmputa ịchọpụta gị Nexus 5 ọma. Ọ bụrụgodị na ọ meta ya, ị ga-Kweta na, ị pụrụ nanị ịdọrọ na dobe music, foto na vidiyo n'etiti na kọmputa na gị Nexus 5. Mgbe ọ na-abịa ọzọ faịlụ, dị ka ozi ederede, na kọntaktị na ngwa, i nwere ike ime ihe ọ bụla ma nbuli a-eze ume.
Otú nyefee faịlụ site na PC na-Nexus 5?
Na ọnọdụ a, m na-egosi na ị na-enye ụfọdụ-atọ ndị ọzọ ngwá ọrụ a ogbugba. N'etiti multiple-atọ ndị ọzọ ngwaọrụ, na Wondershare MobileGo for Android guzo n'ihi na ya niile-na-otu Android management. Na ya, ị na-enwe ike nyefee ngwa, kọntaktị, akwụkwọ, music, videos na foto site na PC na-Nexus 5 na ma ọ bụ na-enweghị eriri USB. Ọzọkwa, ọ na-enye gị online akụ center site na nke ị nwere ike ibudata ngwa, music na vidiyo na gị Nexus 5.
Download na wụnye ngwá ọrụ na Windows na kọmputa na nwere a-agbalị.
Nzọụkwụ 1. Jikọọ gị Nexus 5 na kọmputa na / enweghị eriri USB
Jikọọ gị Nexus 5 site na eriri USB
Wepụ eriri USB na nkwụnye na kọmputa na-Nexus 5 ejikọrọ. The MobileGo for Android ga chọpụta ya anya ma na-egosi ya na isi window.
Jikọọ gị Nexus 5 na kọmputa na-ejighi eriri
Tupu WiFi njikọ, ị kwesịrị ị na-eme ka n'aka na i nwere arụnyere na MobileGo ngwa gị Nexus 5. Ma ọ bụ, i kwesịrị ibudata ma wụnye MobileGo ngwa mbụ.
Ẹkedori desktọọpụ MobileGo maka Adnroid ngwá ọrụ na kọmputa. Tụgharịa na WiFi na gị Nexus 5. Mgbe ahụ, enweta MobileGo ngwa gị Nexus 5 na iji ya iṅomi QR koodu ke akpan window na kọmputa. Mgbe ọ na-meta ya, gị Nexus 5 ga-ejikọrọ na-egosi na isi window.
Nzọụkwụ 2. Nyefee faịlụ site na kọmputa na-Nexus 5
O doro anya na faịlụ niile na gị Nexus 5 na-categorized na ekpe sidebar. Iji nyefee otu ụdị nke faịlụ, ị dị nnọọ pịa kwekọrọ ekwekọ Atiya na mbubata faịlụ gị Nexus 5.
Gaa égwu. Na ngwa window, pịa Wụnye mbubata na wụnye ọtụtụ ngwa gị Nexus 5.
Pịa Music, Videos ma ọ bụ Photos. Na kwekọrọ ekwekọ window, pịa triangle n'okpuru Add ịgbakwunye music / video / foto ma ọ bụ ha na nchekwa gị Nexus 5. Mgbe ngwá ọrụ hụ na dị music na vidiyo nwere ike ghara egwuri na gị Nexus 5, ọ ga-echetara gị ma ị chọrọ iji tọghata ha ma ọ bụ.
Site na ịpị Ndi ana-akpo, unu na-abanye na kọntaktị window. Pịa Import / Export> Bubata kọntaktị site na kọmputa. Na ndọpụta menu, ị nwere 5 nhọrọ: si vCard faịlụ, si Outlook Express, si Outlook 2003/2007/2010/2013, si Windows Live Mail na si Windows Address Book.
Cheta na: na SMS na XML format na ị exported na ngwá ọrụ nwere ike dị kwa. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị ga-esi XML faịlụ na ụzọ ndị ọzọ, na ị na-enweghị ike mbubata ha.
Iji nyefee akwụkwọ, dị ka DOC, Excel, PPT, PDF ma ọ bụ ndị ọzọ, ị nwere ike pịa Files. N'okpuru gị SD kaadị Atiya, ị nwere ike ịdọrọ na dobe ọ bụla akwụkwọ gị Nexus 5.
Download bara uru ngwá ọrụ nyefee faịlụ ka Nexus 5 si PC.
Ndabere eBooks ka iTunes na Tinye eBooks ka iOS ngwaọrụ